Sharci cusub oo caawinaya waayeelka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Erik Ullenhag, Wasiirka is dhexgalka. Sawirle: Fredrik Persson/Scanpix
Sharci cusub oo caawinaya waayeelka
La daabacay måndag 14 maj 2012 kl 13.32
Dawlada dalkan ayaa rabta in ay joojiso kana hortagto dadka waayeelka ah ee la takooro dhan kasta oo ka mida qaybaha bulshada. Sharciyada maanta jira ee la xidhiidha cunsuriyeenta dadka waayeelka ah ayaa ah qaar sharciga ku xariiqan dhanka shaqada iyo waxbarashada.
- Ma rabno in aynu haysano bulsho dadka lagu cunsuriyadaynayo maadaamo ay yihiin wayeel, ayuu sheegay wasiirka is dhex galku, Erik Ullenhag.
In dadka hawl gabka ah la cunsurideeyo ayaa noqon doonta mid mabnuuc ka ah dhanka, goobaha caafimaadka, xafiiska bulshada, xafiiska caymiska, xafiiska sanduuqa dadka bila shaqada ah, hayadaha dawliga ah ee laga helo kaalmada dhaqaalaha waxbarashada iyo ka qayb galka shaqooyinka caadiga ah, ayaa ah qorshe dawlada horyaala.
Laakiin wasiirka is dhex galka Erik Ullenhag, oo masuul ka ah waxyaabaha la xidhiidha cunsuriyada ayaa sheegay, in ay caadi ama sideedii hore ahaan doonto waxyaabaha la xidhiidha dhanka da'da hoose ee lagu galo goobaha lagu caweeyo ama iibsashada sigaarka.
Wasiir Ulenhag ayaa sheegay in sharcigan cusubi noqon doono mid badala fikirka ku aadan dadka wayeelka ah.
- Waayeel badan ayaa la kulma in loo eego da'da ay jiraan ee loo eegin in ay yihiin bila aadmi, ayuu sheegay wasiirka is dhexgalku mar u waramayey hayada wararka ee TT, intaasna raaciyey in waayeelka la kulmay falal la xidhiidha cunsurinimo da'da ay jiraan awgeed ay heli doonaan xaqooda.
Macnaha qorshahan ayaa ah in la badalo dabeecada qalafsan ee ku wajahasan dadka hawl gabka ah.
Sharcigan cusub ayaa laga yaaba in in u hirgalo sannadka 2013 bishiisa Janaayo.